Mba Amerịkà na mba Britain etinyego aka n’ịchọ ụmụ akwụkwọ ahụ ndị Boko Haram tọọrọ
Emeneka Agbapeela Mmiri Ọ Gbapuuru Ndị Ụmụeri...
A Dụọla Ụmụakwụkwọ Ka Ha Dị Njìkere Tupuu Chọba Ohere Ọrụ...
Ọkụ Ọgbụgba: Gọọmenti Anambra Amachiela Ire Ihe Na-Adọ Ọkụ n'Ime Ahịa...
N'ihi oke ọkụkụ ọgbụgba ahụ na-adapụtasị n'ime ahịa dị iche iche n'ala anyị, gọọmenti steeti Anambra akwàdola ma guzosie ike na mkpebi ahụ o nwere ịmachi ire ma ọ bụ zụọ ngwaahịa ọbụla na-adọ ọkụ n'ime ahịa ọbụla na steeti ahụ.
Arazụ Akpọọla Oku Ka A Kwalite Ejirimara Ndị Igbo...
A kpọkuola ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu ka ha na-akwàlite njirimara ha, ọ kachasị asụsụ na omenala Igbo, iji wee mee ka ha dị ọkpụtọrọkpụ n'ọgbọ niile.
Ndị Mgbasaozi Enyela Obianọ Onyinye Nkwanye Ugwu...
Obianọ Abàgide n'Itute Amụma Ịgba Mmiri n'Ubi...
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ abagidela n'itute atụmatụ iji igwè gbaa mmiri n'ubi, iji mee ka amụma ọrụ ugbo na-agawanye n'ihu na steeti ahụ, ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị.
Nteje Akwaa Onye Ndị Fụlani Gburu...
Ọ bụ nnọọ oge anya mmiri na Nteje dị n'okpuru ọchịchị Oyi na steeti Anambra, dịka ndị obodo ahụ zukọrọ n'ụjụ wee lie ma mee mmemme akwamozu Oriakụ Rosemary Okwuefuna, bụ onye ndị Fụlani na-achị ehi gburu n'ebe ọ na-akọrọ onwe ya ugbo na Nteje.
Ozi anyị nwetara site n’aka ndị Punch na-akọwa na mba Amerịkà na mba Britain esonyegoro ala Nigeria maka inyere ndị ọlụ nchekwa aka n’ịchọ ụmụ akwụkwọ mmadụ narị abụo n’iri atọ n’anọ ndị ahụ ndị otu Boko Haram jere tọọrọ n’ụlọ akwụkwọ na Gọọment Girls Secondịrị School na Chibok na Steeti Borno.
N’abalị 14 nke ọnwa Eprelụ, ndị Boko Haram jere tọrọ ụmụ nwanyị ụmụ akwụkwọ ndị ahụ n’ogige ebe ha bi na Chibok. Mmadụ iri atọ n’ime ha jisiri ike gbanarị ndị Boko Haram were lọghachị n’ogige ebe ha bi n’ụlọ akwụkwọ ahụ.
Ndị soja ala Nigeria kwuburu na ha atọghapụgo ụmụ akwụkwọ ndị ahụ e ji eji, mana anyị mechara chọpụta na nke a abụghị ezi okwu. Ndị nne na nna ụmụ akwụkwọ ahụ gbakọrọ gawa na mpaghara ọhịa Sambisa ebe ndị Boko Haram zoro ụmụ akwụkwọ ahụ maka ịle ma ha ọ ga-achọtanwu ụmụ ha. Kama ha laghachiri azụ mgbe ha chọpụtara na ndị Boko Haram jiri ngwa agha dị egwu kwadosie ike.
N’ụbọchị Tọzdee gara aga, onye isi ala Nigeria, bụ Goodluck Jonathan, kpọrọ ndị amị Nigeria ka ha mee ịhe ọ bụna ha pụrụ ịme iji hụ na atọghapụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ.
Gọọmenti Anambra Akpọọla Oku Ka A Kwalite Ịdị Ọcha...
Ọchịchị steeti Anambra akpọkuola ụmụafọ steeti ahụ ka ha malite ịgbaso ibi ndụ adịmọcha, ọ bụghị naanị iji kwalite ezi ọnọdụ ahụ ike ha, kama na onye dị ọcha na-anọdebe Chineke nso.
Ndị Uwe Ojii Awụchikọọla Ndị Otu Nzuzo n'Awka...
Aka ndị ọrụ uwe ojii na steeti Anambra anwụchikọọla ma kpụgharịa mmadụ karịrị iri atọ na ise n'ọnụ ọgụgụ, bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo dị iche iche. Ndị otu nzuzo a bụ ndị a nwụchikọrọ site na mpaghara ebe dị iche iche, nke gụnyere Awka, Obosi, Enugu-Ukwu na Ọkịja, ma bụrụkwa ndị nọ n'agbata ahọ iri na iri atọ na anọ.